Isikhala abahlukanisi ingilazi Interiors zesimanje ngekwehlukahlukana kwalo kanye, ngaphandle kokungabaza, baphumelela kakhulu. Futhi, Izici, ngezabelo okungenani zilingana maqondana kwayo kukhona nazo anezinhlaka futhi afanayo frameless. Yiqiniso, kulezo nakwamanye izakhiwo ezisetshenziswa ziyafana, empeleni izinto, nakuba kuyiwa isethulo okubonakalayo, bonke bekhonza ukufeza izinjongo ezifana esisebenzayo, yebo, futhi izakhiwo banayo, kucishe. Kodwa ngesikhathi esifanayo, ingilazi ngodonga kanye Uhlaka telulwimi eziningi umehluko oyisisekelo phakathi ngokwabo, imiphumela zabo zihlukene akuhambisani yobuhle, futhi amathuba esisebenzayo phezu ngabanye.
Kanjani ukusabalalisa ngodonga umthwalo ingilazi?
Oluthandwayo ngenxa yesizathu esisodwa noma kwenye ezihlukahlukene ingilazi separators kusekelwe kakhulu izidingo zamanje umthwalo nokusabalalisa. Eqinisweni, uzimele yokwahluka ingcindezi ukusabalala ngokulinganayo, ngokudlulisela it kusukela ngendwangu ukuze uzimele. Yilokho inquma azinze nokwethembeka ngisho esimweni kakhulu uqweqwe, noma ngisho kabili, imidwebo, ikhono sesisonke ngemininingwane opaque kokuphothula. Esikhathini ukukhiqizwa zonke nengilazi ngodonga, yebo, akunjalo. Visual imishini ukuze izindonga okuqinile esobala kakhulu ngaphandle iziqobosho ebonakalayo noma ezicashile kakhulu esifanayo kwenza kube nesidingo kokufaka ingilazi ngodonga nge untula amalungu Uhlaka mpo, kwesokudla futhi ovundlile kulokhu zivame ukumelela into ngokuphelele Isithonjana, walubeka amaphuzu athile. Futhi okunamathiselwe efana, yebo, futhi umthwalo kwasakazwa dot, singavumeli ukwandisa isisindo panel nosayizi yabo.
zemiraro ephathekako okufaka ne ukufakwa ingilazi ngodonga
Unalokhu engqondweni, kungase abe nombono oyiphutha wokuthi ukuthengwa ingilazi ngodonga ongakhonza imisebenzi zokuhlobisa kuphela, ngokuba engazinzile alithembekile ngokwemvelo. Akukhona ngakho, ngoba amaphrofayli ukukhiqizwa wanamuhla impahla super-sinamandla futhi eziqinile ngisho ivumela izakhiwo ezifana ngempumelelo indima yayo elingaphakathi, ukuqinisekisa ukuthi Analogue njengabawufanelekele udonga esikhulu, futhi bona ingilazi ngenkathi impahla yayo azizimbi kunalawo asetshenziswe nozakwabo nohlaka.
Amavithamini Indlovukazi ': Ukwakheka, izinkomba kanye contraindications